वर्तमानको सरकार केपी शर्मा ओलीको नभई कम्युनिष्ट पार्टीको हो | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
वर्तमानको सरकार केपी शर्मा ओलीको नभई कम्युनिष्ट पार्टीको हो
आज नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार छ । तर उसका नेताहरु भन्छन् केपी ओली को हो हाम्रो होईन हामीले चुनाव चिन्ह सूर्य लगि सकेका छौं । माओवादीका कमाण्डर भएर १७ हजार निहत्ताको ज्यान गएपनि कमरेड प्रचण्डले ५ हजारको मात्र जिम्मा लिएको घोषणा गरे । पछि त कैयौ थप भए जे जति मारे पनि प्रजातन्त्रवादी ने.का. र एमाले चुप बसे यी दुई पार्टीका नेताहरुलाई भागबण्डा मिले पुग्यो नेताले पाएको भागबण्डा जनतालाई दिनु पर्दैन त्यस कारण नेताहरु खुस छन् । मर्छन त जनता मर्छन नेता एक पनि मरेन १० वर्षे द्वन्दकालमा १७ हजार मारिए जसमा नेता कुनै पनि पार्टीको मरेन । हामी निहत्ता जनता केपी ओलीको सरकारलाई चिन्दैनौं, चिन्छौ केवल ने.क.पा.को सरकारलाई नेकपाको सरकार ने.का. सँग तुलना गरि रहेको छ । पुष्पकमल दाहाल, गिरिजा प्रसाद कोइरालाका उत्तराधिकारीका रुपमा देखिएका छन् । आफ्नै पार्टी नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा संसद भंग गराई आफूले संसदको अधिवेशन रत्नपार्कमा बसालेका थिए भने प्रचण्ड माइतीघर मण्डेलामा विरोधमा उत्रिएको देखाई मात्र रहेका छन् । आफ्नो सरकारद्वारा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीद्वारा संसद भंग गराई जनतालाई भ्रममा पार्न सडकमा उत्रेका छन् । यिनीहरुले त केवल सदनमा देशको बारे निर्णय गर्ने हो सडकमा हैन । आफ्नो अधिकार र दायित्व सदनमा निभाउन नसकि सडकमा आएर दायित्व पुरा हुदैन । तिमीहरुलाई त जनताले सडकमा दौडन नपठाई सदनमा गहन छलफल गरी देश चलाउन पठाएको हो । अब तिमीहरु असफल भयौं बरु हात खडा गरी देउ पुग्यो ख्याल ठट्टाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भंग गरेको होइन तिमीहरु लेण्डोप दोर्जे बन्न थाल्यौ र देश बचाउन संसद विघटन गरेको हुनु पर्दछ ।
नेपाल आत्म निर्भर थियो
१७ औं १८ औं शताब्दीसम्म पनि आत्म निर्भर र स्वतन्त्र रहेको देश आज पूर्ण पराधिनतामा दगुर्दै छ । कसैलाई प्रमाण चाहिन्छ भने खानी उद्योग फलाम तामा खानीका सुरुङ र फलाम निकाली छोडेका कुराबाट प्रष्ट हुनेछ । बैतडी, दाङ लगायतका जिल्लाहरुमा खानीका सुरुङ र त्यहाँकै फलामबाट बनाएका भाडा वर्तन अझै छदैछन् । कुनै कुनै ठाउँमा त ५/१० हजार लिटर पानी अटाउन सकिने तामाको गाग्री छदैछन् । अनामनगर बैध्यखाना काठमाडौंमा पनि थियो । पछि राजा महेन्द्रले ५०÷६० उद्योगहरु मित्र राष्ट्रसँग बनाई माग्यो । जुन ०४६/०४७ पछि ०४८ सालतर्फ राजाको रीसले ने.का. र सरोकारवाला अरुले बेचि खाए । आज भारतीय कम्पनीहरुले प्रवेश पाएको छ । सरिया, सिमेन्ट उद्योगहरु पनि छन् ।
← संसद गिराउने र जगाउने खेल नेपालको शोक
७१ वर्षीया वृद्धाको हत्या गर्ने अभियुक्त सार्वजनिक →